Ndiani Akabatsira Kuvandudza Wiricheya? | Karman® Mawiricheya
Pakave nevanhu vazhinji vakabatsira kugadzira iyo wiricheya zvazviri nhasi. Munhoroondo yese, chinangwa che mavhiripu yachinja zvishoma kuita kuvandudza zvinodiwa nevanhu.
Yokutanga yakanyorwa wiricheya yakanga yakanyorwa padombo rekare reChinese asi isina chokwadi kuti ndiani akaigadzira. Zvisinei, yekutanga wiricheya wakazvipira inozivikanwa seyakaipa chigaro chakagadzirirwa King Phillip II. Muumbi wacho haazivikanwe uye zvakadaro inozivikanwa kuti chinangwa chayo chikuru kwaive kubatsira Mambo Phillip II kufamba-famba muhumambo hwake.
Makore makumi matanhatu gare gare kuzvifambisa wiricheya yakagadzirwa neanogadzira mazita anonzi Stephen Farfler. Ichi chaive chinhu chakanakira nekuti chaitendera munhu anoshaya kufamba iva zvishoma.
Muna 1783 John Dawson akagadzira wiricheya yakafanana neiya yakagadzirwa naFarfler zvakadaro yaive nemavhiri maviri mahombe uye diki kumberi.
Muma1800s iyo Bhati Wiricheya yakanga isina kusununguka uye vatsva vatsva akatanga kuwedzera chimiro kuti ubatsire kuvandudza it. Nekudaro, vagadziri ava havazivikanwe asi vamwe ve kugadzirisa kunosanganisira mavhiri ari nani aive nemhango seaya ari pamabhasikoro nenzendo dzetsoka dzakagadziridzwa batsira kupa kunyaradzwa zvirinani.
Mumakore ekuma1900 chigaro chakapetwa chakagadzirwa naHarry Jennings cheshamwari inonzi Herbert Everest. Ivo vakabva vagadzira Everest & Jennings kambani yaizotonga iyo wiricheya indasitiri kwemakore kusvikira sutu yeantitrust yaiswa.
Anotevera mugadziri uyo akaita a shanduko yakakosha kune iyo wiricheya aiva George Klein. Iye ndiye mugadziri anogadzira iyo wiricheya yemagetsi izvo zvaisafanirwa kumisikidzwa nechero ani zvake kana kunyangwe mushandisi.
John Donoghue naBraingate vakagadzira ichangoburwa tekinoroji yeiyo wiricheya iyo inobvumira vashandisi vane mashoma kufamba kubatana ne wiricheya kuburikidza nemonitor yakabatana nehuropi hwavo kwavanogona kutumira mirairo yepfungwa kune iyo wiricheya kuita kuti iite zvavanoda kuti iite.
Pakave nevamwe vanhu vazhinji vakabatsira mukusimudzira kwe wiricheya kuva kwazviri nhasi. Hazvina kutaurwa mune izvi nyaya mawiricheya zvakagadzirirwa kubvumira avo vasina iyo simba kushandisa makumbo avo kuita mitambo, kushandisa kunze, mukati, uye kwese kuitisa izvo zvinoshandiswa nevashandisi.
Kune akasiyana siyana wiricheya sarudzo uye masitaera nezvezvinangwa chaizvo. Tekinoroji yakabvumidzawo vagadziri kugadzira mavhiri akakosha uye zvinhu izvo zvinogona kukanganisa mashandiro eiyo wiricheya.